Ndiwukhupha njani umdlalo ngokupheleleyo? - Khipha
Eyona > Khipha > Khipha isigcawu solitaire-indlela yokusombulula
Khipha isigcawu solitaire-indlela yokusombulula
Ndiwukhupha njani umdlalo ngokupheleleyo?
Vula eyakhoumdlaloIthala leencwadi. Fumana eyakhoumdlalo. Cofa kumachaphaza amathathu phantsi kweumdlaloithayile. KhethaKhipha.
Ngu-2021, kwaye njengakuqala konyaka, kubonakala ngathi imikhonyovu iya isiba yinto eqhelekileyo. Ke kweli nqaku ndiza kudlula kwisikrelemnke sezinto ezahlukileyo nokuba zezintsha kraca endingazange ndeva ngazo, okanye ubuncinci ziya zixhaphake ngakumbi, nokuba azikho ntsha ncam , ke kuzakufuneka uphinde unyuke kulo nyaka masiqale ngento eyaziwa ngokuba bubuqhetseba bemoto. Nokuba ubona ukuthumela umsebenzi, okanye mhlawumbi i-imeyile okanye intengiso yento ebanga ukuba ungakuhlawula ukuba uqhube nje emotweni yakho.
Kwaye uluvo lokuba uphendule kule ntengiso kwaye bathi, 'Ewe, konke okufuneka ukwenze kukubeka ilogo yentengiso kwimoto yakho, uqhube ngendlela oqhele ukwenza ngayo, kwaye siza kukuhlawula amakhulu amawaka eedola ngeveki ngalo. . Ngokwesiqhelo, ukuba uyayamkela loo nto, baya kukuthumela itsheki eyitsheki yomgunyathi kumawaka ambalwa eedola. Ingeniswe ebhankini ngaphambi kokuba baqonde ukuba inzima.
Kodwa okwangoku bazokuxelela, 'Owu, sebenzisa loo mali uye kumthengisi wethu ogxile ekusongelweni kwemoto umnike nje imali umbhatale kwaye uyakuyiphatha.' Ndiza kukuxelela ukuba wenze oku ngendlela engaguqukiyo ncam, njengokuhambisa ngocingo okanye iodolo yemali, into enjalo. Ngexesha elithile, mhlawumbi kungekudala emva kokuba wenze loo ntlawulo kulowo ubizwa ngokuba yingcali oyinxalenye yobuqhetseba, emva kweentsuku ezimbalwa ibhanki iya kufumanisa ukuba itshekhi yeyobuqhetseba.
Umlawuli wenkonzo ye-mcafee
Ke imali iyarhoxiswa kwiakhawunti yakho kuba bekungafanelanga ukuba ifakwe yayifakwe kwitshekhi nakwimali oyithumele kwisikhohlisi. Ke ulahlekelwe yiyo yonke into. Ke olu lolunye umahluko kubuqhetseba bokutshekishwa komgunyathi.
Soloko ulumkele nayiphi na inkampani ethi siza kukuthumela itsheki kwaye uya kuyisebenzisa ukuthenga into. Luhlobo lomdwebo. Kulungile, ngokulandelayo sinento ebizwa ngokuba lusapho.
Kusenokwenzeka ukuba ukhe weva ngale nto. Ezi zinto bezikhona okwexeshana, kodwa zibonakala ngathi ziya zixhaphake ngakumbi. Kule fowuni, ufumana umnxeba othi usisihlobo sakho kwaye yinto engxamisekileyo apho kufuneka ubanike imali.
Oku kuhlala kufana nokuba bangaphandle kwedolophu ngeholide kwaye basandula ukubanjwa. Umzekelo, badinga imali kwiithagethi zebheyile kubantu abadala kwaye emva koko bazenza abazukulwana. Kwaye baya kuthi, 'Owu Tamkhulu, Makhulu, ndisejele.
Ndifuna idiphozithi, 'nokuba yeyiphi na. Kwaye baya kuthi, 'Nceda ungaxeleli umama notata. Uya kuhlanya.
Nceda uthumele imali ngoku kwaye ndiza kuyilungisa kwaye ndikuxelele. Kwaye injongo kukuba bathumele imali ngaphambi kokuba uvume. ' eli bali kunye nabani na ukufumanisa ukuba ngaba lo mntu uphume edolophini kwaphela.
Ke bazama ukwenza ukuba uthumele imali ngokungxamisekileyo nangasiphi na isizathu. Ihlala ingxamiseke kakhulu. Bayayidinga imali ngoku.
Mhlawumbi ukuva ityala kungomso kwaye bafuna imali yegqwetha, okanye kufuneka baphume ejele ngoku kuba andazi ukuba kukho abantu aboyikisayo entolongweni, olo hlobo lwento. Kwaye aba bahlekisi banobukrelekrele kunokuba ucinga njalo. Ndabona isithuba apho umntu ebuza ukuba kutheni evakala ngokwahlukileyo.
Bathi, 'Awuva ngathi ungumzukulwana wam.' Kwaye bathi, 'Owu, kulungile, ndophuke impumlo xa ndibanjwa kwaye yiyo loo nto ndivakala ngokwahlukileyo. Ke ukuba ukhe ufumane umnxeba ovela komnye umntu, nkqu nomntu omaziyo, othi badinga imali kwangoko kwaye kufuneka uyidlulisele imali okanye wenze into efanayo, kungcono ungaphenduli umnxeba ovela kwinombolo yokuqala ongayenzanga ' Ndiyazi kodwa ubuncinci ngandlela ithile jonga imbali kwaye uyazi ukuba lo ngumkhonyovu.
Ke ukuba ufumana umnxeba kumntu ofuna idiphozithi kusenokwenzeka ukuba bubuxoki. Kulungile, qhubeka, ubuqhetseba obulandelayo ziifowuni ezingezizo ezivela kubantu abathi bangama-Apple okanye iNkxaso yeAmazon lly umahluko kubuqhophololo bokungqinisisa iodolo osenokuba weva ngayo ngaphambili. Ngokwesiqhelo le ibeyimeyile kude kube ngoku.
Bakuthumelela isiqinisekiso somyalelo wobuxoki kwaye bakuxelele ukuba urhoxise loo myalelo, ngena apha. Kwaye yinto yobuqhetseba. Ewe, loo nto yahlukile.
Bayakubiza kwaye benze i-robocall, kwaye banokuthi into enje, 'Le yinkxaso yeAmazon kwaye oku kuyalumkisa ngokuthengwa okungagunyaziswanga kwewaka leedola. Cinezela enye ukuze uthethe nenkonzo yabathengi ukuba urhoxise. Kwaye, ewe, ukuba uphendula umnxeba uthi, 'Hayi, khange ndiyiyalele le,' cinezela enye, uthetha nomkhonyovu, kwaye baya kuthi ngokufuthi babuze ubungqina bakho.
Uzama ukufumana inombolo yeakhawunti yakho yasebhanki ukuba ithi, 'Owu, ukucima le nto sifuna iinkcukacha zakho zekhadi letyala zantlandlolo' okanye into enje ngobuqhophololo, kwaye enyanisweni i-FTC ineesampulu zeeklip zomsindo, Ukudlala okungagunyaziswanga kwe-iPhone XR 64 gigabytes ze- $ 749 iyalelwe ngeakhawunti yakho yeAmazon. Ukucima iodolo yakho okanye ukunxibelelana nomnye wabaphathi beakhawunti, nceda ucofe enye okanye uhlale emgceni.
Lowo ngumzekelo omnye weAmazon. Kodwa kuyacaca ukuba iApple yenye yezo zisetyenziswa ngabakhohlisi. Bakubiza kwakhona ngohlobo oluthile lweerobhothi kwaye uthethe into efana nokufikelela okungagunyaziswanga kwiakhawunti yakho ye-iCloud.
Ukubetha kwakhona, okanye uthethe nenkonzo yabathengi, okanye ubize loo nombolo ukufikelela kwinkonzo yabathengi, emva koko uye uqhakamshelane nomkhonyovu, ke ukuba ufumana nayiphi na kwezi fowuni, ungaze ubize inombolo ekuxelela yona, kuphela ukuba awuqinisekanga nyani uye kwiAmazon okanye kwiwebhusayithi esemthethweni yeApple kwaye uqhakamshelane nabo usebenzisa inombolo esemthethweni edweliswe kwiwebhusayithi, ingelilo inani elikunika umnxeba njengoko kunokuba kukukhohlisa. Njengenqaku elisecaleni, ukuba ukhe ufumane i-robocall kolu hlobo lobuqhetseba okanye enye, ungaze ubethe amanani kwifowuni. Misa nje ngokukhawuleza.
Kungenxa yokuba xa besiva ucofa inombolo ngoku bayazi ukuba yinombolo yomsebenzi kwaye inokongezwa kuluhlu kwaye ufumana ngakumbi nangakumbi iifowuni zogaxekile kungcono ungaphenduli xa ungaziqondi kwaye uxhome kwangoko phezulu ukuba ufumanisa ukuba ngumkhonyovu. Okwangoku uhlobo olulandelayo lolo hlaselo luhlobo lokuhlawula umnxeba osetyenziswayo ohlawulelwayo, ihlala irobocall, mhlawumbi i-voicemail ethi, 'Heyi, uhlawule ngaphezulu ityala lakho lokugqibela' okanye nantoni na. Kwaye unelungelo lokubuyiselwa imali ezinkozo.
Into ekufuneka uyenzile kuku. Ukucinezela okanye ukufowunela loo nombolo ukuze uthethe nenkonzo yabathengi. Isenokungabi yimali ebuyiswayo.
Unokuthi, 'Owu, kulungile, qinisekisa kwaye siza kukunika isaphulelo kwityala lakho elilandelayo.' Into enjalo. Ewe kunjalo, xa ucinezela enye okanye uqhagamshela nale nkonzo yabathengi oyinyazi, kuya kuhlala kukho uhlobo oluthile lokuqinisekisa ngentlawulo ngohlobo lweakhawunti yakho yebhanki apho kufuneka ubeke khona imali.
Kufuneka sazi ukuba siyifaka phi imali okanye into enjalo, iinkcukacha zakho, abazisebenzisayo ukubela isazisi sakho, nantoni na abanokuyithatha kuwe-kwaye nakwimeko elungileyo, ayinguwe Sela ozama ukuba Imali yakho yeyona ifanelekileyo njengefemi yokuthengisa isiketshi yokwenyani izama ukufumana ukuba utshintshele kumnikezeli weqokobhe labo kwaye basekhona abalala. Ke awufuni nokunxibelelana nabo. Usasebenzisa i-sketchy, ubuchule bokuthengisa obuxokayo.
Ke mhlawumbi bubuqhetseba okanye umntu ongafuni kuba nento yokwenza naye, sikwindawo yesihlanu. Sinento eyaziwa ngokuba bubuqhetseba bokulinda ipasile. Kwaye yintoni entsha ngayo kukuba eneneni bathumela imiyalezo, ngelixa ngaphambili iluhlobo oluthile lwe-imeyile yokuqinisekisa i-imeyile oyifumanayo njengoko benditshilo ngaphambili kodwa ngoku ungaqala ukufumana imiyalezo kwaye ubazi mhlawumbi negama lakho okanye into evela kubathengisi beenkcukacha kunye nezinto ezinjalo.
inkqubo yengozi kwakhona
Kwaye baya kuthi, 'Owu, unepakethe evela kwi-USPS okanye kwiAmazon elindileyo. Cofa kule khonkco ukuze ufunde ngakumbi kwaye 'ungayifumana' njani into enjalo. Kodwa xa ucofa ikhonkco, uya kusiwa kwiphepha lokubhalisela iAmazon enokwenzeka okanye nayiphi na iwebhusayithi ebanga ukuba ivela kuyo.
Kodwa ewe sisiza sobuqhetseba kwaye baya kuthi bebe ulwazi lwakho lokungena kwangoko kwaye balusebenzise uku-odola kwiakhawunti yakho yokwenyani kwaye emva koko baqokelele imali yakho ngaloo ndlela. Kodwa kwakhona, ukuba ufumana enye yezi ungaze ucofe ikhonkco lokukhwabanisa kwaye unomdla wokuba iwebhusayithi izakuba njani, musa ngoba ngokuqinisekileyo banee trackers zala makhonkco onokwazi ukuba ngubani ononxibelelwano ononqakrazo kwaye ngubani t. Kwaye emva koko uya kuqala ukufumana umyalezo obhaliweyo ngakumbi kuba bayazi ukuba unenombolo yomsebenzi.
Ke sukuyenza. Ngokuqinisekileyo, ngokulandelayo sinalo lonke udidi lobuqhetseba obusaziwa njengobuqhetseba bengeniso. Kwaye oku kuye kwaxhaphaka kakhulu kunyaka ophelileyo kangangokuba i-FTC iphehlelele umkhankaso omtsha wokwazisa abantu obizwa ngokuba yi-Operation Income Illusion ukwazisa abantu ukuba obu buqhetseba buya buxhaphaka.
Obu buqhetseba buza ngazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Ngapha koko, ukusongelwa kwemoto esithethe ngayo ekuqaleni yayisisimo sayo. Kodwa ngesiqhelo uya kubona uhlobo oluthile lomsebenzi owuthumelayo okanye mhlawumbi intengiso kwimidiya yoluntu.
Unokufumana i-imeyile. Kwaye ngokusisiseko iya kuthi, oh, sebenza ekhaya kwaye uyakube usenza iitoni zemali ngexesha elincinci. Kwaye ngokusisiseko iya kuba yinto eninzi kakhulu, kulungile ukuba kuyinyani.
Kwaye ngaphandle kwesizathu abasisebenzisayo ukufumana ingqalelo yakho, zininzi iindlela abanokuthi bathathe ngayo imali yakho. Ungaphinda wenze umkhonyovu wobuxoki uphinde uthi, 'Owu, ungowalo msebenzi' Kuya kufuneka uphume uye kuthenga umshicileli okanye into kumthengisi wethu yithuba lotyalo-mali okanye ithuba leshishini, 'Owu, uya kuba ishishini lakho kwaye uya kusebenzisa eyona ndlela yethu ishishini ilungileyo, 'into enjalo. Kwaye kuya kufuneka utyale imali yakho, kodwa awusoze uyifumane.
Kodwa ngesiqhelo intambo eqhelekileyo kukuba kufuneka ngandlela thile utyale imali yakho ngaphambili. Kwaye emva koko baya kuthi shwaka kwangoko amatyeli aliqela, kufana nobuqhetseba bokutshekisha okungeyonyani. Ke uya kuyifihla into yokuba usebenzisa eyakho imali, kodwa enyanisweni nguwe.
Okanye mhlawumbi kufana nolunye uhlobo lokuthengisa olunemigangatho apho kuya kufuneka uthenge imveliso ngaphambi kokuba uyithengise. Kodwa ngazo zonke ezi unokucela nje, yima umzuzu xa besithi bazakundibuyisela imali ngokuthenga le nto, kutheni ungavumi? Ukuba abayithengi ngokwabo? Kwaye kucacile ukuba bubuqhetseba. Ewe, ngokulandelayo, udidi olulandelayo lobuqhetseba yiCoronavirus Relief kunye noKhuthazo.
Ngokusisiseko, xa kunikwa ixesha lerhafu elizayo, kukho abakhohlisi e-USA kwaye ingxoxo malunga nemithetho yenkuthazo inikezela ngamathuba amaninzi kubuqhetseba ukuba baxhaphaze kwaye baqhathe abantu. Icebo eliqhelekileyo kukuba abo banobuqhetseba banxibelelane nawe ngeendlela ezahlukeneyo, nokuba yi-imeyile, umyalezo obhaliweyo, umnxeba, nantoni na, kwaye baya kuthi, hee, ngoku unelungelo lokuvuyisana noKuvuselela itsheki yakho yeedola 2,000 nantoni na. Kwaye konke okufuneka ukwenze ukubanga ukuba yi-XYZ emva koko banokuthi babe imali yakho okanye ulwazi lomntu ngeendlela ezahlukeneyo.
Umzekelo, banokuthi, 'Hayi, itsheki yakho ye-coronavirus ilungile. Sifuna kuphela iinkcukacha zakho zebhanki ukuyifaka. Mhlawumbi inombolo yeakhawunti yakho yebhanki okanye ukungena kwakho ebhankini. Kwaye ke bangena bayikhuphe ukuba bayakwazi.
Okanye baya kuqhagamshelana nawe bathi, 'Hei, ukuze ufumane i-coronavirus check, kuya kufuneka ungene ukuze ubekho konke.' Awungenanga ngemvume. Kwaye ke baya kukunika ikhonkco kwiwebhusayithi enokuthi ibile ulwazi lwakho kwaye ilusebenzise ukuze ubambe isazisi sakho, okanye emva koko banokubi ukungena kwakho ebhankini, izinto ezinjalo.
Ukuba unomdla malunga nokuba uvumelekile na ukufumana naluphi na uhlobo lokukhuthaza okanye nini, kusoloko kungcono ukunamathela kwimithombo yeendaba ezisemthethweni. Ndicinga ukuba zininzi iindawo zeendaba ezisemthethweni kwiindaba zalapha ekhaya okanye zikazwelonke kwaye bayakuxelela kwaye bachaze ukuba ngubani ofanelekileyo, ukuba kufuneka ubhalise konke, andicingi ukuba kunyanzelekile, kwaye uyayenza Akunyanzelekanga ukuba uxhomekeke kwezo imeyile zinemifanekiso engenayo kwaye awazi ukuba zivela kubani. Kulungile, ngoku siza kuthetha ngohlobo lokugqibela lwe-scam entsha ene-cams enxulumene nogonyo.
Andithethi ngesitofu sokugonya uqobo, ewe, sisikrelemnqa, kodwa i-FBI kunye noorhulumente kunye noorhulumente basekhaya bathe abagqwirha basebenzisa isitofu sokugonya njengesizathu sokukhohlisa abantu ukuba babakhohlise ngeendlela ezahlukeneyo. Kwaye unganxibelelana nala maqhekeza ngeendlela ezahlukeneyo zentengiso kwimidiya yoluntu. Unokufumana omnye umyalezo obhaliweyo, i-imeyile ebesithetha ngayo.
Kwaye xa ucofa ikhonkco okanye uphendula kwintengiso, baya kuzama ukwenza, umzekelo, bakungenise lonke ulwazi ngeenkcukacha zakho, ezinje nge: B. 'Hei, ubhalisele uluhlu lokugonya Kuya kufuneka usinike lonke ulwazi lwakho, inombolo yokhuseleko lwasentlalweni, iinkcukacha zebhanki zokuhlawula 'okanye into enjalo. Okanye ungathi, 'Owu, kuya kufuneka ufake inombolo yekhadi letyala lakho ukuze ubange imali yokuqhubekeka Omnye umzekelo endiwuvileyo kukuba ungazama ukuthi, 'Hee, ukuba usibhatala umrhumo, singafumana wena ugonyo kuqala.
Esi sikrokro kwakhona. Akukho ndlela yokuhlawula ukuya entlokweni yomgca indlela esemthethweni yokubhalisela iyeza lokugonya le-coronavirus. Soloko uye kwilizwe lakho okanye kwiwebhusayithi esemthethweni yaseburhulumenteni kwaye ujonge ulwazi ngendlela yokwenza le t.
Sebenzisa onenote ngaphandle kweintanethi
Sukubhalisa ngokuchofoza kunxibelelwano lwamajelo onxibelelwano okanye ii-imeyile ezingacelwanga ozifumanayo kodwa yazi ukuba esi sisikrelemnqa ukuze ujonge ukuba uyifumene i-imeyile kwaye ujonge ukuba ivela kumthombo osemthethweni. Kwaye kwakhona, ungasoloko uye kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye unganqakrazi nakuphi na amakhonkco ukuba ufuna ukuqiniseka. Ndiyathemba ukuba ngoku uzilungiselele ngcono obu buqhetseba endibukhankanyileyo obuqheleke kakhulu ngoku. okanye ungabona ubuqhetseba obufanayo, yithi, hey, oku kuvakala kufana nolunye ubuqhetseba.
Inokuba nje ngumahluko walonto. Kwaye unokulungiswa ngcono kwixa elizayo. Ukuba ufuna ukuhlala ubukele, ndingacebisa ukuba ujonge inqaku lonyaka ophelileyo malunga nobuqhetseba obutsha kwi-2020.
Obu buqhetseba abuyekanga. Khange unyamalale. Ke unokulungiswa ngcono ngokujonga oku.
Unokucofa kuyo apho. Enkosi ngokujonga abafana, kwaye siza kubona kwinqaku elilandelayo.
Kutheni le nto bebiza iSigcawu Solitaire?
Umdlalo uvela ngo-1949, kwayeigamaivela kwifayile ye-isigcawuImilenze esibhozo, isalathisa iimfumba ezisibhozo ekufuneka zigcwalisiwe ukuphumelela umdlalo. ...
Molo lo nguGary kwesi sifundo ndiza kuhamba neengcebiso zokuphucula amathuba akho kwiSigcawu Solitaire Ngoku kunzima iSigcawu Solitaire kunzima kakhulu ndicinga ukuba ukunyuka kwam kwinqanaba lokuphumelela kufana neepesenti ezili-11 xa ndilungile I-15 ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 kuluhlu, ke masiqale ngoku, xa ubona ibhodi apha, enye yezinto endizonwabelayo ukuyenza kwasekuqaleni kukuzama ukugcina amakhadi afanayo xa ndithanda umhlakulo ngeefosholo ezinokwenza iiklabhu kunye neeklabhu zedayimane. nedayimani iintliziyo neentliziyo njalo njalo. Ndifuna ukuzama ukucoca isithuba esinye okanye ezibini kwangoko, ukuba ndinako, ukuze ndibenendawo engakumbi yokusebenzela kamva, kwaye silapha sihamba 37 kwaye ngoku kuMove 38. Ndibambekile apho unako.
Andikwazi ukuphuma xa ubona inkosi kwikona ephezulu ngasekunene, ngokusisiseko inkosi kwikona ephezulu ngasekunene endleleni, ndibambekile kwaye andikuthandi ukubambeka ndizakuzama ukuphuma i-fairway, ndiza kubeka ukumkanikazi phaya, ngoku ndiza kuba neendlela zokuhamba ngokukhawuleza kwaye ndiyathanda ukusebenzisa eyokuqala nantsi uLawulo C kwaye ngokusisiseko ukwenza intshukumo yakho yokugqibela okanye Ukuhamba kwethu okanye into enjalo ukuyilungisa. Ungazama iindlela ezininzi zokusombulula into efana nepuzzle kwaye ukuba ayisebenzi kwaye uzama enye into okanye umahluko okanye ukwahluka kwesithathu kwaye ungasebenzisa nje iCtrl Z ukulungisa intshukumo yakho yokugqibela kunye neCtrl C usebenza kuphela xa Uchithe isitaki, masibone unentliziyo epheleleyo yaseSanta Claus okanye idayimani yomhlakulo okanye uwele elinye inyathelo endithanda ukulisebenzisa liqhosha le-M kwaye libonisa intshukumo elandelayo ekhoyo, ngamanye amaxesha awuyithandi, ngamanye amaxesha ungxamile kwaye ufuna ukwenza amanyathelo akhawulezileyo ambalwa kwaye xa ufika kwindawo ethile emva koko ucinga ngokungena kwiqhosha elibonisa intshukumo elandelayo efumanekayo kwaye xa uthe wasilela kweyokuqala efana nayo, uya kumbonisa ebonisa elandelayo okanye elandelayo njalo njalo, iya ekhohlo ukuya ekunene kwiscreen kwaye iyaqhubeka ukuhamba ukuba uyafuna ukubona ukuba ndizobe utolo ngasekunene kwimfumba yesihlanu ndizama ukuphuma ngoku, hayi ukungcwatywa Apha kwaye ukuba ndinayo nayiphi na inkunkuma okanye into efana naleyo zine zimbini zine zine zine zimbini t Imingxunya ndiza kuyibeka phantsi kweemfumba ezintlanu okanye ngaphantsi kwesihlanu ndibeke apho kwaye into endiyifunayo ndizama ukuba nemfumba okanye ezimbini endizibiza ngokuba yimfumba yenkunkuma kwaye ndizame ukwenza indawo yokuba nezinye iimfumba izinto ezijikeleze kwaye uzame ukufumana indlela ngelinye ixesha ukufumana ukuphumelela lo mdlalo apha, ngoku masiqhubekeke sihambise inombolo 78 apha, njengoko ubona ndihamba ngenxalenye yokubuyisela endaweni yokuba ujonga ibhodi emfutshane ukuya jonga ukuba ukhupha nasiphi na istaki esinakho kwaye ungayenza njani ilungile inokubonakala okanye ayikhangeleki icacile apha, kodwa ndiza kubonisa umthetho-siseko endibiza ukuba ungene endaweni apha kunye nendlela yokukhupha enye yazo. Kuza kubakho imfumba yesithathu ngasekunene, ezintlanu ze-Heartspile, ndingathanda ukukhupha le nto ukuba ndinakho kwaye ndibone ukuba yintoni ephantsi kweli khadi ukuze siyenze loo nto sizakuthatha ezintathu zomhlakulo kwaye le mfumba iyisa kwiGreen, into endiyenzayo emva koko, emva koko ndiza kuthatha ezine zentliziyo, kodwa hayi ezobugcisa ezihlanu ndiza kushukumisa iintliziyo ezine phantsi kwesihlanu somhlakulo phaya emva koko ndiza kuthatha izitaki ezintathu yemihlakulo kwaye ukhuphe iintliziyo ezine kwaye emva koko ndingafumana ezintlanu zentliziyo zihambe ngaphezulu kwayo kwaye ngoku ukubuyisela yindawo ebaluleke kakhulu ekuphuculeni amathuba akho ukuba ungakhangela iindawo okanye ujonge ibhodi endiyifumene iindlela ukusebenzisa umgaqo wokutshintsha.
Uhlaziyo olungagqibekanga lomsebenzisi
Ukuqhubeka apha, ukhetho olunye kukuba ndinaba bahlanu njengeMemori, kodwa ukuba uyaqaphela ukuba iiJackspades zezesibini ezantsi ngasekunene kukaKumkanikazi weSpades kwaye zithengisa ngokungafanelekanga apho, endaweni yoko ukwenza enye indlela ukubeka nje ukumkanikazi we-jackunderneath ke ndizokuhambisa ezi ziqwenga kwaye ndikhangele, ukumkanikazi apha uza kukhawuleza phambili ngoku ndihambile uyazi uyazi ke ukuba ndinezihlalo ezibini endinokusebenza ngazo, emva koko ndizama ukujonga kubo nganye isitaki nganye nganye kwaye ndibone ukuba ndingakwazi na, ukuba zingaphi iziqwenga ezingasebenziyo ndiza kuzama elandelayo kuba ndiza kusebenzisa uLawulo Z kwaye emva koko ndikhathalele ukuba siyaqhubeka apha, ndithatha jonga ngokukhawuleza ebhodini kwaye uyakufumanisa ukuba ndifuna ukuhambisa iintliziyo ezintlanu phantsi kweedayimani ezintandathu, kodwa andinako ukuyisusa le mfumba kuba ndinamaqhekeza kunye neentliziyo, kodwa ikhona indlela yokwenza, kwaye Ndiza kusebenzisa umgaqo-siseko obizwa ngokuba kukufaka endaweni kwakhona, kwaye bazokufumana okuninzi kumanyathelo ahlukeneyo ndenza oku ngokuhamba kancinci ndinayo t iintliziyo ezimbini zihamba, emva koko ndinokuthi ndiza kuthatha iiklabhu zakho ezintathu, hayi ukuba siye phantsi kweedayimane ezine, emva koko susa iintliziyo ezimbini kwaye ndizakuhambisa iiklabhu ezine emva koko ndihambisa iintliziyo ezine phantsi kweentliziyo ezintlanu. , emva koko ndihambisa iintliziyo ezintlanu phantsi kweedayimani ezintandathu, emva koko ndihambisa iintliziyo ezimbini, emva koko ndikwiminqamlezo emithathu, emva koko ndihambisa iminqamlezo emine kwaye ndicofa isitaki ngentliziyo ezimbini, kakhulu yokuhamba, kodwa ngokusisiseko njengomgaqo wokufaka endaweni ye-orcs kwaye nje ukuba uqonde ukuba uphucula kakhulu amathuba akho, uya kuqala ukuqaphela iidayimani ofuna ukuzizama kamva, ke ngoku ufuna ukuzama ukudibanisa izitaki ezifanayo. Ukuba ujonga ibhodi apha uya kuqaphela iidayimani kwaye ndiza kukubeka ngokufutshane apha. Into endithanda ukuyenza kukuba iidayimani ezilithoba ziye ezantsi kwiidayimani ezimbini ndiza kuzihambisa ezi piles kwaye ndinegumbi elaneleyo lokwenza oko ukuze nditsale abahlobo ndize ndidibanise ukuba, nantsi enye ingcebiso andiyenzi ' t ndinomzekelo othile kule meko kodwa ndiza kugqitha kwinto endiyithethayo kwaye ndithetha ukuthini ndikhetha ingqokelela yokuphela apho inkosi iphantsi.
Masithi bendinoKumkani weSpades phaya, ukuba uyaqaphela kwanele iiSpades ukugqiba imfumba ngoku, ukuba bendinenye iKing yeSpades, ethi, kwindawo eluhlaza njengekona ephezulu yasekhohlo ibiyinto oyithandayo ukwenza xa yonke enye into inye ikukugqibezela ingqumba emoyeni ovulekileyo kwaye isizathu sokwenza oko kungenxa yokuba ufuna ukuzinika indawo ethe xaxa yokusebenza emva kwaye ucinga ukuba uyakhumbula ukuba olu lawuloZ okanye ulungelelanise inqaku lokulungisa Iintshukumo zokugqibela azizukusebenza xa sele wenze i-apile ke ndizokuyigqiba le mfumba yemihlakulo apha ikhoyo inkosi kwaye ndiyibonisile ukuba iyahamba apha kwaye intle kakhulu uyasebenza kwaye wenza ukudityaniswa ngakumbi, oko kulele, hamba 307, ezinye zihamba apha ngoku, njengoko benditshilo, esinye sezitshixo zokuzinika ithuba? ukuphumelela kufuneka uzinike isithuba sokuhamba kwakho okulandelayo ufuna ukuzama ukungabambeki, kuba ukuba ujonga kwikona esezantsi ekunene xa ucofa iqhosha lokutsala awazi ncam ukuba la makhadi azakuvela njani isutikheyisi yamahashe Uyazi ukuba unokwenza ezimbalwa unayo, uyazi, indawo okanye ezimbini ezivulekileyo ukuba zisebenze emva koko banamathele inkosi yento ethile kwaye iluhlobo oluthile lokuzibambisa ngokwakho. Ufuna ukuzama ukuyiphepha loo nto ukuba kuyenzeka ke ndithathe umhlakulo omabini ndawabeka apho kwaye xa uqaphela ndibona indibaniselwano ngoko ke ndithathe imihlakulo emine, ndiyibeke phantsi kwemihlakulo emihlanu ndiyisuse apho , ngoku ndiye ndaphuma phakathi kweemfumba ezimbini kwaye kufuneka ndibone ukuba ndihamba njani apha oh amakhadi ayaphathwa ngoku kwaye ndiluhlobo lokuhamba kwam apha ke ngoku ndinemfumba ezine kwaye inene inene ngenene yigusha elungileyo yokwenyani yokuhamba ngokufuthi ayenzi kodwa ukuphinda nje ukuba ufuna ukuzama ukunciphisa umngcipheko wokungcwatywa kumqolo olandelayo kwaye uzame ukuba nawo xa ungakwazi ukusombulula yonke into okanye xa ubaleka ngaphandle kwesithuba ukusombulula yonke into ofuna ukuyizama. ukuba nditsho ubunzulu obunye nje ndiyathetha ukuba bubunzulu obunye kuphela bokuthatha kuphela ukutsala enye ukuyihambisa ndithetha ukuba unganamakhadi amathathu okanye amane okanye alishumi kwaye kulo mzekelo apha kodwa kuthatha iTreyini enye ukuyihambisa ngoba onke amakhadi afanayo, ke ukuba utsiba amakhadi ahlukeneyo? Ndifuna nje ukujonga nzulu kumakhadi ahlukeneyo emva koko ndiye phambili kwaye ndijongane nawo kwaye ndilapha ekugqibeleni kwam.
Izandla zam zilungile. Ndiyisombulule kwaye umdlalo uphelile, ke ndifuna ukuphinda iingcebiso ezimbini eziphezulu endinazo kwizimvo zam ndizama ukuqinisa okanye iingcebiso ezintathu eziphezulu ezenza isibindi esiqinileyo zama ukuzinika indawo yokuhamba ukuba ufuna indawo yakho ngekhe usebenzise i-Ctrl + Z ukuya kwizitokhwe kunye nezinto kunye nengxolo yokuzibandakanya kolunye ugcino okanye ugcwalise esinye sezitaki ukuze ugcine oko engqondweni kwaye ndicinga ukuba ibiyiyo kwaye ucinga ngokutshintsha nje njalo njalo Enkosi ngokubukela
Yeyiphi eyona app ilungileyo yeSigcawu Solitaire?
Phezulu 5Isigcawu SolitaireImidlalo yeKhadiI-AndroidAbasebenzisi
Isigcawu solitaireIiMasters zeMonster Brain Studious Limited. ...
Isigcawu solitairenguSoftlick. ...
Isigcawu solitairenguKen Magic. ...
Imidlalo yeKhadi eli-150 +Isigcawu solitaireUkupakisha (iRikkiGames limited) ...
Isigcawu solitaireUkupakisha kwasimahla ngamakhadi esiqhelo.
NgoFebruwari 1 2021
Hayi yintoni guys Andrew kwaye namhlanje ndizokubonisa indlela yokufumana iMinesweeper kunye nesolitaire suite ngoku simahla kweyakho Windows 10 I-PC, ngesizathu esithile iMicrosoft ithathe isigqibo sokutshintshela kwisitayile se-freemium kwimidlalo yabo oko kuthetha ukuba ukuze ukudlala umdlalo kufuneka ubukele intengiso okanye uhlawule i-10 yeedola ngonyaka ukudlala iphedi yomdlalo simahla ngoku kuba oku kufanelekile kubantu abaninzi njengoko le midlalo isimahla nakweyiphi na inguqulelo yangaphambili yeWindows Zimbini iindlela iindlela ezilula kwaye indlela yokuqhekeza ngesandla ukuze indlela yokuqala ibe yiyo yonke into ekufuneka uyenzile, yiya kwisikhokelo esipheleleyo kwaye ukhuphele i-Igajethi yeHax kunye ne-Windows 7 imidlalo yeWindows Vula le fayile yokuseta kwaye nje ukuba uyilayishe, chwetheza ukhetho kwi-Specter ulwimi kwaye ke uya kusiwa kuludwe lwayo yonke imidlalo onokuyikhuphela kwaye uyidlale kwiW Wowsows 10 pc ukuba uyazibona njengeewindows 7 imidlalo ukuze zilingane nokudlala, kuphela-olu luhlobo lokujonga zibaleka kakuhle kwiwindows 10 emva kokuba ukhethe zonke imidlalo oyifunayo nqakraza kufakelo olulandelayo kwaye zonke ezi fayile ziya kubekwa kwindawo elungileyo kwihard drive yakho xa sele yenziwe kwaye ngoku xa usiya kwimenyu yakho yokuqala phantsi kwazo zonke iiapps uza kubona entsha Icandelo leMidlalo kwaye ngezantsi ungayibona yonke imidlalo oyifakileyo ngoku kwisixhobo sakho. Okulandelayo, siza kwenza indlela yokubulala, uya kuba uyitshintsha ngesandla Windows 7 imidlalo ukuze ukwazi ukufikelela kwiWindows 7 PC ukuba awunayo uya kubambelela kule ndlela ilula ndigqithile kwiWindows 7 PC yam endiyisebenzisayo ngoku Windows 10 PC, kodwa kulungile Njengokuba zombini ezi nkqubo zinesakhiwo esifanayo sediski, uya kubona ifayile yenkqubo kwifolda yakho kwaye uza kubona umdlalo weMicrosoft yayo, eya kuthi ikhutshelwe kwi-USB drive. Ukongeza kule folda, kuya kufuneka uye kwihard drive yakho kwakhona phantsi kweWindows.
Yiya kwiNkqubo 32 kwaye ukuba uskrolela ezantsi uza kubona ifayile ebizwa ngokuba ngamakhadi emidlalo DLL Ukwanazo nohlobo lwekopi kwi-USB drive yakho emva koko uyixhome kweyakho Windows 10 PC ngoku emva kokuba une-USB drive yakho eqhagamshelwe Windows 10 PC, kuba ndibona apha endinayo kweli phepha, uya kuba nefolda yeMidlalo yeMicrosoft kunye neMidlalo yamakhadi kule fayile yeDLL emva koko yakho Windows 10 PC ungafikelela kule hard drive phantsi kweeNkqubo eziza kukopa ngaphezulu kwemidlalo ethambileyo nakwenye Imicrosoft imidlalo yolawulo kufuneka ukope le midlalo yamakhadi dll kwifolda nganye yesolitaire, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uyifake kwiintliziyo ezikhululekileyo kunye nesolitaire kunye nesigcawu solitaire emva kokuba yonke into isetiwe. Into yokugqibela ekufuneka uyenzile ukuhlela iifayile ze-exe njengoko zisaqulathe t Ukwenza oku kuya kufuneka ujonge uguqulelo ngoku ukuze ukhuphele intloko uthe etre kule meko ndisebenzisa i-x xd kwaye ungacofa nje kwifayile kwaye uyivule ngomhleli we-hex ngaphezulu ukuze ubambe nje mahala, ke uyitsalele kumzekelo H XZ kwaye ke ulungile ukuya ngoku uya kuqaphela onke la maxabiso ahlukeneyo u-x ngoku uya ujonge umtya ngokuxhomekeke ekubeni yeyiphi umhleli oyisebenzisayo kunye nendlela oseta ngayo, oku kunokuba phambili okanye ukubuyela umva. Jonga ukuba usekwe kwinkqubo oyisebenzisayo.
Nje ukuba ufumanise ukuba umtya uguqula i-70 iye kwiileta ze-EB kwaye ngoku ndibone iVirgin checksum nje ukuba ufuna ukuphuma kumhleli we-hex kwaye ugcine olo tshintsho kwaye ubuye umva uyenze nomdlalo ngamnye kule macroscope- Imidlalo Ifolda, nje ukuba utshintshe kwaye ugcine yonke imidlalo sele ulungile, kodwa ukuba uyenza ngale ndlela endaweni yale ndlela ndiyibonisileyo ngaphambili, ngekhe ubenayo loo midlalo yolawulo kwimenyu yakho yokuqala eyona ilula Ukufikelela kule midlalo, cofa ekunene kwifayile kwaye ucofe iqhosha lepini ukuqala ngoku okanye nawuphi na umdlalo owufakileyo oza kuwubona apha. Yivule, ungakhetha indlela yokudlala oyifunayo kwaye ibaleke ngokugqibeleleyo ngaphandle kokuhlawula i-10 yeedola ngonyaka ukophuka ngokupheleleyo kwayo yonke le miyalelo kwaye njengamaxesha onke, nika izimvo kwaye ubhalise kuhlobo olufana nolwamadoda
Uyisusa njani iSigcawu Solitaire kwiWindows XP?
IWindows XP: Cofa ukongeza okanye ususe iiNkqubo. Xa ufumana le nkqubo iSigcawu Solitaire, cofa kuyo, emva koko wenze enye yezi zinto zilandelayo: Windows Vista / 7/8: Cofa u-Khipha. IWindows XP: Cofa kwindawo ethi Susa okanye uguqule / ususe itab (ngasekunene kwenkqubo).
Indlela yokulahla ingqokelela yeMicrosoft Solitaire?
1 Cofa kwi-Start Menu & gt; Useto & gt; Inkqubo & gt; Iiapps kunye neeMpawu. 2 Lindela de uluhlu lwabantu lokusebenza lubekhona. Cofa kwiNgqokelela yeMicrosoft Solitaire. 4 Iya kutyhila imenyu yokuHambisa kunye nokuKhipha. 5 Cofa kwiKhipha iqhosha lokususa ingqokelela yeMicrosoft Solitaire kwiWindows.
Ufumana ntoni ngokudlala iSigcawu Solitaire?
Ukuba uthanda ukuzicel 'umngeni, iSpider Solitaire igcina zonke iintlobo zamanani omdlalo. Ilandela indlela odlale ngayo, ukuphumelela kunye nelahleko, ukuphumelela imigca, kunye nokuba zingaphi iintshukumo ezithathileyo zokuphumelela. Ungaqokelela iindebe xa ufikelela kwinani elithile lempumelelo kwinqanaba ngalinye ngokunjalo.
Yeyiphi eyona app ifanelekileyo yokudlala i-solitaire?
Ingqokelela yeMicrosoft Solitaire yenye yeefayile zokusebenza ezazisoloko zikhona iiWindows. Iguqukele kwinguqu engcono kakhulu ngoku, kodwa abo bathanda ukudlala amakhadi bayayithanda. Nangona kunjalo, inokuba kukuchitha ixesha kuwe okanye kumntwana wakho.